ဘုန်းကျော်: Oct 14, 2010
ခန့်စည်သူကို သြစတျေးလျက ဗီဇာပိတ်ကြောင်း သေချာ..
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, October 14, 2010
ကျနော်တို့ Perth မြို့ က တော်လှန်ရေးအင်အားစုအနေနဲ့ ၁၉-၁၀-၂၀၁၀ ရက်နေ့မှာ Western Australia Immigration နဲ့တွေ့မယ်။ ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်က General Issues in Burmese Community, Perth ဖြစ်တယ်။ Immigration က Senior Officers နဲ့ Burmese Community Laison Officer တို့တက်ပြီး ကျနော်တို့ဆွေးနွေးတာကို နားထောင်မယ်။ ကျနော်တို့အင်အားစုဘက်က တက်မဲ့လူတွေကတော့- ကျနော်၊ ကိုရစ်ချက်၊ ကိုသီဟရွှေ တို့ဖြစ်တယ်။
ကိုရစ်ချက်က Perth မှာနေတာ နှစ်ပေါင်း ၃၀-ကျော်ပြီ။ သူ့အဖေနာမည်က ဦးခင်ဖြစ်တယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့နေ့မှာ ဗမာပြည်ရဲ့ အလံကို တရားဝင်လွှင့်ထူပြီး၊ အင်္ဂလိပ်အလံကို တရားဝင်ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့သူပဲ။ ကိုချစ်ချက်ကို KNU ကနေ Hon Captain အဖြစ် လောလောဆယ်အသိအမှတ်ပြုတယ်။ သူက Perth မှာ ဒသနိကဗေဒနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့တယ်။ အခုလောလောဆယ် Children Founddation ကို Perth မှာ ဦးဆောင်ပြီးတည်ထောင်ထားတဲ့သူ။ နယ်စပ်မှာကျောင်းတွေဖွင့်ပြီး အကူအညီပေးသူဖြစ်တယ်။ သူ့မိန်းမ အင်္ဂလိပ်မတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
ုကိုသီဟရွှေ ဆိုတဲ့လူက ၁၉၈၈-ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ၈၈-မှာ တောခိုလာတယ်။ ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သြစတျေးလျမှာ အခုလောလောဆယ် နိုင်ငံရေးခိုလှုံနေတယ်။ တော်လှန်ရေးကိုအားတက်သရောလုပ်တဲ့သူပဲ။
ကျနော့်အကြောင်းတော့ ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတွက် ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူး။
၁၉-ရက်နေ့ လုပ်မဲ့အစည်းအဝေးမှာ ကျနော်တို့ အဓိကဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စက ဒုက္ခသည်အတုတွေ၊ လုပ်စားဒုက္ခသည်တွေကို သြစတျေးလျနိုင်ငံက လုံးဝလက်မခံဖို့ကို အဓိကဆွေးနွေးမယ်။ လက်ရှိ PERTH မှာရှိနေတဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ပက်သက်တဲ့ ဗမာတွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေကို ဖော်ထုတ်အရေးယူပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ပို့အောင်လုပ်မယ်။
နယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ ငွေရှင်ကြေးရှင်ဓနရှင်တွေရှိတယ်။ သူတို့က ဒုက္ခသည်အတုတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့က စမှုစာလို သုံးဖက်ချွန်အခြေအနေရှိတယ်။ မြန်မာပြည်လည်းပြန်လို့ရတယ်။ တော်လှန်ရေးအင်အားစုနဲ့လည်းပေါင်းတယ်။ သြစတျေးလျလာဖို့အတွက်လည်းကြိုးစားနေကြတယ်။ သူတို့ကြောင့် တကယ့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ၊ တော်လှန်ရေးသမားတွေ နစ်နာရတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သူတို့ကို သြစတျေးလျကလက်မခံဖို့ ကျနော်တို့ အချက်အလက်နဲ့ပြောမယ်။
နောက်တမျိုးရှိသေးတယ်။ ဘာတော်လှန်ရေးမှမလုပ်၊ နိုင်ငံရေးမလုပ်၊ ငတ်လို့၊ ဒုက္ခရောက်လို့ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲဝင်ပြီး နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့လုပ်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်။ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ နဲ့ အခြား နိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်။ သူတို့ကိုလည်းလက်မခံဖို့ပြောမယ်။
ဆိုလိုချက်ကတော့ ဒုက္ခသည်အတုတွေကို လက်မခံဖို့ဖြစ်တယ်။ သူတို့သြစတျေးလျရောက်ရင် ဗမာပြည်ပြန်ပြီး -င်-ိုး-ခံပြန်လုပ်ကြတယ်။ သူ့တို့ကြောင့် ကျနော်တို့ BURMESE COMMUNITY အတွက် အကျိုးမရှိရုံ မကဘူး၊ ညီညွတ်ရေးပါပျက်ပြားစေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒုက္ခသည်လုပ်စားတွေ၊ အတုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး IMMIGRATION တင်ပြမယ်။
ကျနော်တို့အင်အားစုက BURMESE COMMUNITY ကို ကိုယ်စားမပြုဘူး။ တာဝန်သိတဲ့လူတွေအနေနဲ့တင်ပြမှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အိုင်ဒီယာ၊ ဆန္ဒ၊ နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလိုချင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲလိုက်ချင်တဲ့လူပြောကြပါ။
ဒုက္ခသည်တွေကို သြစတျေးလျအစိုးရက PROCESSING လုပ်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ စေတနာ့လုပ်အားပေးအနေနဲ့လုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောမယ်။ ကူညီမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တကယ်ခံရတဲ့လူတွေ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိရေးပဲ။ အခု PERTH မှာ သုံးဖက်ချွန်စမှုစာတွေတအားများနေလို့ ဒီကိစ္စကို ကျိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။
တော်လှန်ရေးဘက်က သူပုန်တွေ၊ ပြည်တွင်းက ထွက်ပြေးလာတဲ့သူပုန်တွေ၊ တကယ့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေက အကျိုးမခံစားရဘူး။ လုပ်စားတွေ၊ လူလိမ်တွေပဲ တတိယနိုင်မှာတပုံကြီးဖြစ်ကုန်ကြပီ။ ခင်ဗျားတို့ ဒီလိုအခြေအနေကို ကြည့်ရက်လား။ ခင်ဗျားတို့လည်း ခင်ဗျားတို့ဒေသကနေ အစိုးရတွေကို တင်ပြကြပါ။
အောက်ကစာက Immigration ကပြန်စာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေ့ခွင့်ရအောင် အကြံပေးတဲ့ ဒေါ်ကော်နီ (TRW) ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒေါ်ကော်နီက Perthမှာနေတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်နေပါပြီ။ အခုကိစ္စကို သူကောင်းကောင်းနားလည်ပုံရပါတယ်။
Good afternoon Phone,
Thank you for your interest and email.
Both my supervisor Veronica Bannon and I are more than happy to meet you
and other distinguished persons.
Unfortunately, the 15.10.2010 is notasuitable time or date. Will you be
available for for the 19.10.2010, Tuesday at 10am?
Please let me know, so I can confirm this date and schedule it in our
I look forward to your response, and meeting you.
Settlement Grants Manager & Community Liaison Officer